हामी धरती त्यस शताब्दीपछि, मापन छ सिकेका छौं वर्ष, महिना र दिन। हरेक समय अवधि यसको आफ्नै पद छ। उदाहरणका लागि, उमेर, दिन, आधा वर्ष। यहाँ हामी एक "दशक" को रूपमा यस्तो कुरा हो, यो अक्सर केही अन्य सर्तहरू रूपमा प्रयोग गरिएको छ विचार, तर तैपनि यो मूल्य थाहा पनि आवश्यक छ।
यो परिभाषा सामना पहिलो पटक मान्छे, अक्सर आश्चर्य: दशक महिनाको - कि कति दिन हो? यस लेखमा हामी नजिकको यो विषय हेर्नुहोस्।
शब्द जो "दस" अर्थ ग्रीक शब्द dekas, आउँछ। Oddly, तर ग्रीक सम्बन्धित छ जो धेरै अन्य भाषाहरू, मा, एउटै अर्थ संग नै मूल शब्द छ। यस खातामा, त्यहाँ केही अनुमानको, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण को जो "दस", जस्तै शब्द यसलाई साधारण भारत-युरोपेली भाषा थियो जब समय देखि हाम्रो आएको छ कि छ छन्।
को एटिमोलजी आधारित शब्दहरू "दस दिन" र "दस" को मसूडों को एक धेरै छ जो खाता, राखन अर्थ - दस औंला। पहिले, केही संस्कृति मा एक हप्ताको दस दिन बराबर थियो, त्यो हो, दस दिन, अरूलाई मा - पाँच दिन, रूप, उदाहरणका लागि, प्राचीन रूस मा। पहिलो पटक समय यो एकाइ फ्रान्सेली रिपब्लिकन पात्रो प्रयोग लागू गरिएको छ।
पुरातन जापान, दशकसम्म महिनाको विभाजन जो त्यसपछि शब्द "Dzjun" भनिन्थ्यो, व्यापक भएको छ। यो अस्थायी आयाम पोस्ट-क्रान्तिकारी फ्रान्स पछि शुरू भएको थियो, र अवधि दस दिन समय को सानो indivisible एकाइ थियो।
फ्रान्स, यस अवधारणा युरोपेली देशहरूमा धेरै मानिसहरूले भनेका भाषामा पतन र तीन भागहरु एक महिना मा विभाजन जो समय को एक उपाय, बन्दछ।
के शब्द "दशक" गर्छ?
दशक - समूह एक प्रकारको दस एकाइहरु समावेश छ। यो अवधि मुख्य रूप महिना आदर प्रयोग गरिन्छ।
को साधारण स्वीकार परिभाषा आधारित महिनाको दशक - यो प्रत्येक जो दस दिन बराबर छ समय को एकाइ छ। हाल, यो परिभाषा साधारण दैनिक जीवनमा उदाहरणका लागि आर्थिक क्षेत्र वा तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको छैन, र,। यो पनि यो पनि ज्योतिष मा प्रयोग गरिन्छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ।
कहिलेकाहीं अन्तर्गत कि दशक को शीर्ष मा एक विशिष्ट घटना, उदाहरणका लागि, "अंग्रेजी संस्कृति को एक दशक विश्वविद्यालय को मा" नबुझाउन वा "साहित्य र रूस को मानिसहरूले कला दशक।" यस मामला मा, महिनाको दशक - यो कि दस दिन, वा अरू तेस्रो महिना लागि जाने निश्चित गतिविधिहरु छ। यहाँ शब्द सार्वजनिक महत्व विशिष्ट छुट्टी वा घटनाको सन्दर्भमा प्रयोग गरिन्छ।
दस-दिन अवधि, आधुनिक सोभियत पात्रोमा एक हप्ता प्रतिस्थापित जो - महिनाको शब्दकोश Ushakov दशकमा दिएको व्याख्या आधारमा। दस दिन को समय अवधि, प्रशिक्षण सत्र को अनुसूची मा प्रयोग गरिन्छ जो। यो पनि तथ्याङ्क र अर्थशास्त्र को क्षेत्र मा प्रयोग अवधि छ। यो अंग्रेजी शब्द दशक, उदाहरणका लागि, मतलब छैन दस दिन, र दस वर्ष को अवधि। यो संकेतन बेलायतमा प्रयोग गरिन्छ, र पनि केही देशहरूमा।
कति वर्ष को दशक र धेरै कसरी महिनाको दशकहरूमा?
30 (31) दिन, र यसरी को महिना मा, यो तीन दशकमा छ।
, 36. पुरातन रूस मा पाँच वा छ अतिरिक्त दिन प्रयोग Yuletide सिस्टम हटाउन - यी दशकहरु को, त्यसपछि एक वर्ष दस दिन बराबर एक अंतर (365 दिन), 36.5 प्राप्त छ गोलाई - महिनाको दशक भनेर दिइएको यसरी ठ्याक्कै 36 वर्ष दशकमा दस दिन प्रत्येक बराबर मा तयार भएको थियो।
क्यालेन्डर महिना को दशक
तदनुसार, पहिलो दस दिन अवधि दोस्रो दशक दशौं महिनाको पहिलो दिन देखि छ, कि महिनाको सुरुमा देखि रहन्छ - 11 20 नम्बर को अवधि, र यो पछि - 21 देखि महिनाको अन्त सम्म।
तिनीहरूले हुनुपर्छ जसमा फारममा दशक, जसमा तीस दिन, अर्थात् यी अप्रिल, जुन, सेप्टेम्बर र नोभेम्बर समावेश भएको महिना मात्र एक नम्बर छन्। बाँकी महिना महिनाको3दिन मा - एक अतिरिक्त दिन समावेश जो अवधि छ। अपवाद फरवरी को महिना, छ जो पछिल्लो दशक कम्तिमा दस दिन र कि आधारमा आठ वा नौ दिनको एक छलांग वर्ष वा छैन।
एक क्यालेन्डर महिना, दशकहरु मा विभाजित छ जो जस्तै, एक विशेष समय अवधि पर्छ जो राशि प्रत्येक साइन पनि तीन भागमा विभाजन गरिएको छ, तर यो विभाजन सामान्य महिना लागू भ्रममा छैन।
विभाजनको आधार यहाँ दस दिन र दस डिग्री को अवधि छैन। ज्योतिष दशक भन्दा अक्सर, साथै क्यालेन्डर, दस दिन समावेश गर्छ, तर अझै पनि यसको अस्थायी सीमाहरु या त दिशा मा, त्यो छ, उदाहरणका लागि सारे गर्न सकिन्छ, दिन को एक जोडी थप वा कम।
ज्योतिष वर्ष, क्यालेन्डर मात्र यो मामला मा 12 भागहरु, तिनीहरूलाई प्रत्येक विभाजित छ रूपमा यो एक महिना छ, तर राशि को एक निश्चित चिन्ह। यो किनभने तिनीहरूलाई प्रत्येक जो पालो मा राशि चिन्ह असर एक विशेष ग्रह, नियन्त्रित छ ज्योतिष महिनाको दशक, महत्त्वपूर्ण छन् भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ।
यसरी, यो संख्या दस ईश्वरीय नम्बर अतिप्राचीन समय देखि मानिन्छ किनभने दस (दस दिन) को केही रहस्यमय महत्व, पहिल्याउन सम्भव छ।
को ड्रागन संग टाटु बालिका: विचार र स्केचहरू को मूल्य
चेचेन थर - पुरुष र महिला। को चेचेन थर को मूल र अर्थ
Crimea मा Vorontsov महल। Alupka मा Vorontsov महल
पर्याप्त छैन हावा। dyspnea को कारण
Nechyporenko लागि Urinalysis
बच्चा र वयस्क लागि क्लियोपेट्रा पोशाक
स्लाव भाषाहरु Vedas। Svarog - के को भगवान?
"Bes Chagda" - मास्को नजिकै अस्पताल। बाँकी र उपचार
को क्रोनोग्रफ घन्टा र कसरी प्रयोग गर्न के हो?
क्यालोरी, लाभ र सूर्यमुखी halvah को हानि